Kedu ihe bụ smartwatch | Akụkọ akụrụngwa
Kedu ihe bụ smartwatch
Ignacio Sala | | Mobiles, smartwatch
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị ahụla otú ụdị ngwaọrụ ọhụrụ si bụrụ ihe na-arịwanye elu maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ọ bụrụ na anyị tụgharịa okwu smartwatch na bekee ozugbo, anyị na-enweta okwu smartwatch, okwu nke na-akọwachaghị ya nke ọma, ebe ọ bụ na smart nwere obere.
Smartwatches, ebe ọ bụ na ha bu ụzọ kụọ ahịa na Pebble, aghọwo ngwaọrụ ndị na-emegharị ọkwa ndị anyị natara na ekwentị anyị. Mana ka afọ na-aga, ọnụọgụgụ ha na-arụ amụbaala. Ọ bụrụ n'ịchọrọ idozi obi abụọ niile gbasara ụdị ngwaọrụ a, anyị ga-akọwa ya n'okpuru ihe bụ a smartwatch.
Modelsdị ndị mbụ dakwasịrị n'ahịa ahụ, nyere ọrụ ole na ole ma e jiri ya tụnyere ndị dị ugbu a, ya mere ọha na eze dị obere ma ọ bụ ozi na-agaghị ekwe omume ịhụ mmadụ n'okporo ámá maka ụdị ndị a. Megharị ọkwa ọhụụ na ịkọ oge bụ ọrụ ndị bụ isi nke ahụ nyere anyị, ọrụ karịrị oke iji tụlee nzụta ya, ebe ọ bụ na ọ zere ịbụ oge niile na-elele ama iji hụ ma ụda ahụ sitere na ama anyị ma ọ bụ na gburugburu ebe obibi.
1 Smartwatch atụmatụ
2 Ndakọrịta Smartwatch
3 Angụta mgbaaka
4 Nhazi na smartwatches
5 Ebee ka ịzụta smartwatch?
Usoro Apple Watch 4 LTE
Mana ka ọtụtụ afọ gafere, smartwatches ejirila ọtụtụ teknụzụ ma taa, anyị nwere ike ịchọta etu ọtụtụ ụdị si dị ọ bụghị naanị ịgụ usoro nke ụbọchị ruo ụbọchị, kamakwa igosi anyị ọnụọgụ obi (ịdọ anyị aka na ntị ma ọ bụrụ na ọ dị oke elu) , rụọ electrocardiograms, chọpụta elu yana ọdịda nke ndị ọrụ wee gwa ndị ọrụ mberede ma ọ bụrụ na onye ọrụ adịghị agagharị, ha na-etinye GPS yana, dabere na ụdị ndị ahụ, nye anyị ohere ịkpọ oku ekwentị.
Mana ọ bụghị naanị na ọ na-enye anyị ohere ịkọwapụta ọrụ anyị na-arụ kwa ụbọchị, ebe ọ na-enyekwa anyị ohere ịkpọ egwu kachasị amasị anyị, ya bụ, iji ekweisi Bluetooth, ijikwa akụrụngwa nke ụlọ anyị, iziga ozi ederede, ịza oku. , na-enyocha email anyị ... ma ọ bụ ọbụna na-egwu egwu, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ahụmahụ ọ na-enye anyị na nke a na-ahapụkarị ihe a chọrọ.
All smartwatches dị ka ndị dị otú ahụ, nwere na ha nwere, kpọmkwem site na ngwaọrụ ma ọ bụ site na ama nke ọ na-metụtara, na enwere ike itinye ngwa ndị ọzọ, iji gbasaa ọrụ ha na-enye anyị, ụfọdụ n'ime ha enweghị nkọwa na-enweghị atụ. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ọtụtụ elele ihu, iji hazie ọdịdị nke ngwaọrụ anyị, iji dozie ụtọ anyị.
Ihe nche ndị a na-enyekwa ohere ịgbakwunye nsogbu. Nsogbu bụ obere mgbakwunye anyị nwere ike ịgbakwunye na ihu ihu na nke na-egosi anyị ozi sitere na ngwa ndị ọzọ, dị ka ihu igwe, nhọpụta nke usoro ihe ọzọ, ọkwa nke mmetọ gburugburu ebe obibi ...
N'adịghị ka ụwa nke smartphones, ebe anyị nwere ike ịchọta ngwaọrụ yana iOS na gam akporo, n'ime ụwa nke smartwatches, anyị nwere ikike anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị, ụdị nke sistemụ arụmọrụ dị iche iche jikwaa. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka sistemụ arụmọrụ nke nnukwu abụọ ahụ, iOS na gam akporo, n'ahịa anyị nwere smartwatches anyị nwere site na watchOS (iOS) na wearOS (gam akporo).
Ndakọrịta na-enye site na iOS na watchOS na gam akporo na wearOS anyị agaghị ahụ ọ bụrụ na anyị gafere nyiwe, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta uru na ngwaọrụ gị, ihe kachasị mma ị ga - eme bụ ịhọrọ ụdị nke ga - adịrị gị mma. N'ihe banyere iPhone ọ bụ Apple Watch ma ọ bụrụ na ọ nwere njedebe ọ bụla ọ bụ ọ bụla nlereanya jisiri site wearOS.
Ọ bụrụ n’anyị echeghị iji uru niile ngwaọrụ ndị a nwere ike ịnye anyị, maka ihe ọtụtụ anaghị akpọ bụ aestheticsNa mgbakwunye na ịnweta ọkwa, ọ bụrụ na anyị bụ ndị ọrụ iPhone, anyị nwere ike ijikọ ngwaọrụ ọ bụla nke Wear OS jisiri ikele, maka ngwa dị na Storelọ Ahịa App. Otú ọ dị, anyị nwere ike naanị zụta Apple Watch ma ọ bụrụ na anyị nwere iPhone, Ebe ọ bụ na Apple anaghị enye anyị ngwa ọ bụla na Storelọ Ahịa Play iji nwee ike iji ya rụọ ọrụ na gburugburu ebe obibi a.
Na mgbakwunye na watchOS na wearOS, anyị nwekwara ike ịchọta ngwaọrụ ejiri Tizen, na proprietary arụ ọrụ usoro nke Korean ika Samsung. Ruo afọ ole na ole, Samsung agbahapụla kpamkpamOS, nke a na-akpọbu gam akporo Wear, na elekere anya ya niile, na-achịkwa Tizen, sistemụ arụmọrụ nke na-enyeghị naanị oriri batrị, kamakwa arụmọrụ dị elu ma e jiri ya tụnyere wearOS.
N'ime smartwatches, anyị ga-ekwukwa ọtụtụ ụdị nke onye nrụpụta Fitbit na-enye anyị, onye nrụpụta nke bịara n'ahịa na-ere quantifying ọla aka mana na oge na-aga, na mgbe ịzụrụ nke Pebble, ọ maara otú e si emegharị oge ọhụrụ.
Anyị enweghị ike ịkwụsị ikwu banyere ìgwè ndị na-akpọ quantizer, nke ụfọdụ na-akpọkwa smartwatches, n'agbanyeghị na ọrụ ha na-elekwasịkarị anya dekọọ ọrụ niile anyị na-arụ kwa ụbọchị, ma ije ije, na-agba ọsọ, na-agba ịnyịnya ígwè ... M na-ekwukwa na ha nwekwara ike ịkpọ smartwatches, n'ihi na ụfọdụ ụdị na-enyekwa anyị ohere ịnata ọkwa, agbanyeghị ha anaghị ekwe anyị zaa ha ma ọ bụ nata oku, dị ka a ga - asị na anyị nwere ike iji smartwatches nke Tizen jikwaa, watchOS na wearOS.
Ndị na-agụ ya, enweghị ụlọ ahịa ngwa nwere iji wụnye ngwa ndị ọzọ, yabụ ọnụọgụ ọrụ ọ na-enye anyị nwere oke naanị na nke ndị nrụpụta nyere.
Nhazi na smartwatches
All smartwatches dị n'ahịa dị na agba agba dị iche iche na ọtụtụ eriri dị iche iche, iji nwee ike ijikọta ya na uwe anyị kwa ụbọchị, ma ọ bụ uwe na tie iji gaa ihe omume ma ọ bụ gaa ọrụ, na uwe agwa ma ọ bụ jiri egwuregwu. N'echiche a, Onye nrụpụta nwere ọtụtụ nhọrọ dịịrị anyị bụ Apple.
Apple Watch na-enye anyị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị nke ụdị, akụrụngwa na agba niile, yabụ ọ bụrụ na ị bụ maniac ejiji na-amasị gị ijikọ ọnụ mgbe niile, Apple Watch bụ ngwaọrụ ịchọrọ, ọ bụrụhaala na ị nwere iPhone, dị ka m kwuru na mbụ. Nke abụọ emeputa na-emekwa ka dị ka anyị a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke eriri bụ Samsung na Gear S / Watch nso, dị ka Fitbit na ya nso nke smartwatches.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ịhazi quantifiers, ọla aka Xiaomi Mi Band bụ ndị na-enye anyị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke eriri iji hazie ngwaọrụ ma si otú a nwee ike mee ka o kwekọọ n'uwe anyị na-eyi kwa ụbọchị ma ọ bụ n'oge emume.
Ebee ka ịzụta smartwatch?
Ndị nrụpụta niile na-enye ndị ọrụ ohere ịzụrụ ihe ha ozugbo na weebụsaịtị ha, webusaiti ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, ma ọ bụrụ mgbe ọ bụla, anyị ga-achọta onyinye. Ihe niile abụghị nke ihe na-eme na Amazon. Nke a bụ ọtụtụ njikọ ebe ị nwere ike ịzụta ọnụahịa nke isi smartwatches na ngwaọrụ quantifying na Amazon.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Kedu ihe bụ smartwatch
Olee otú Ọkpụkpọ iPhone na-ahapụ ya ka ọ dị ọhụrụ nke igbe